» यौन सम्पर्क किन र कहिले ?
यौन सम्पर्क किन र कहिले ?
१० आश्विन २०७८, आईतवार १५:१६
एजेन्सी – संसारमा सबै भन्दा धेरै आकर्षण यौनिकतामा हुन्छ । त्यसले यौनसम्पर्कका लागि आसक्त बनाउँछ । यौन आकर्षणको आयामहरु समाज र व्यक्ति अनुसार फरक परेको हुनसक्दछ । तर पनि सबै किसिमका यौन आकर्षणका शैलीहरुको केन्द्रीय पक्ष भनेको यौनसम्पर्क हो । यौनसम्पर्क नै संसारको सधैभरी सबैलाई सबै भन्दा आनन्द प्राप्त गर्ने काम हो । यौन मानव मात्र नभएर प्राणी जगतका लागि आनन्दमय हुन्छ । किनकि सन्तान बृद्धिका लागि प्रकृतिले नै त्यस्तै गरी जीव जगतलाई सृटि गरिदिएको हुन्छ ।
जीवनका प्राथमिक आवश्यकता खानु, पिउनु, निदाउनु जत्तिकै महत्वपूर्ण कार्यभित्र यौन तथा प्रजनन व्यवहार पनि पर्दछ । खाना खानु भनेको बाँच्नका लागि हो । तर, प्राणीको लागि खानुको उद्देश्य मिठो ९स्वाद० र आत्मा सन्तुष्टि पनि हो भने जस्तै यौन सम्पर्क पनि मानिसको सवालम भने सन्तान उत्पादनका लागि नै भनेर सधै गरिने होइन धेरैको लागि त आनन्द र आत्मा सन्तुष्टि नै हो । किनकि प्रकृतिले चरम आनन्द आवस भनेर यौनाङ्गहरुलाई विशेष तन्तुहरुले बनाइ दिएको हुन्छ ।
मर्यादित विना यौन शोषण, जवाफदेही र सुरक्षित यौनसम्पर्क हुनु पर्दछ र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा यौन जोडी दुबै जना मानसिक रुपमा तयारी र मञ्जुर हुनु आवश्यक छ । यस्तो हुने अवस्थामा यौन सम्पर्क सन्तान उत्पादनका लागि मात्रै गरिदैन । आनन्द प्राप्तीका सथै यसका अरु पनि फइदाहरु हुने यस क्षेत्रमा विगत बर्षौ देखि विभिन्न प्रशंगमा विभिन्न विज्ञहरुले उल्लेख गरेका छन ।
मर्यादित र सुरक्षित यौन सम्पर्कले सबै भन्दा मुख्या कुरा त तनाव कम गराउँने कुरामा सबै विज्ञहरुको एक मत पाइन्छ । यसका अलावा यौन स्वास्थ्य विज्ञानमा यौन सम्पर्कका केहि फाइदाहरु निम्न अनुसारका भएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ स्
हप्तामा कमसेकम एक–दुइपटक यौन सम्पर्क राख्ने व्यक्तिमा शरीरको प्रतिरक्षी तत्व इम्युनोग्लोबुलिन को मात्रा बढाइ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।यौन सम्पर्क गर्दा शारीरीक तथा मानसिक कार्य हुने हुँदा यसले शरीरको तौल कम गर्न पनि मद्दत गरिहेको हुन्छ । किनकि ३० मिनेटको यौनक्रियाले ८५ क्यालोरी वा सो भन्दा बढि क्यालोरी जलाउँछ ।
तुलनात्मक रुपले धेरै यौनसम्पर्क नगरेको अवस्था भन्दा यौनसम्पर्क गर्ने गरेको मानिसा हृदयघातको संम्भावना कम देखिन्छ ।यौन सम्पर्कले अक्सिटोसिन नामक हर्मोनको मात्रा बढाउँछ । यस हर्मोनले आत्मिय सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका साथै एकआपसमा विश्वास बढाउँछ ।
अक्सिटोसिन हर्मोनको प्रभावले टाउको दुखाइ, हाडजोर्नीको दुखाइ, महिनावारीसँग सम्बन्धित समस्याहरु पनि कम गर्दछ ।अध्ययनले प्रोस्टेट ग्रन्थीको क्यान्सर र वीर्य स्खलनको सम्बन्ध देखाएको छ । धेरै पटकको वीर्य स्खलनले पुरुषहरूमा हुने प्रोस्टेट ग्रन्थीको क्यान्सर हुने सम्भावना कम गर्छ ।
यौन सम्पर्कले महिलाको पेल्भिक मांशपेशीहरुलाइ पनि बलियो बनाउँदछ ।यौन सम्पर्कले मानिसमा राम्रो निद्रा जगाउँछ जसले गर्दा शरीर स्वस्थ र स्फूर्त हुन्छ ।